यस्तो रहयो पुँजी बजारका हस्तीहरुको दशैं - Aarthiknews
मंगलबार, ११ कार्तिक २०७७ Tuesday, 27 October, 2020
यस्तो रहयो पुँजी बजारका हस्तीहरुको दशैं
काठमाडौं । नेपाली हिन्दुको सबैभन्दा ठुलो चाड दशै चलिरहेको छ तर यो चाडमा नेपाली पूंजी बजारका हस्तीहरुमा भने हर्ष उल्लास छैन । प्रश्न उठ्छ, किन मानिसहरू यति निरास भैरहेका छन् रु अघि पछि भन्दा लामो बिदाको उपयोग गर्न विदेश घुम्न जाने, रमाइलो गर्ने ब्रोकर कम्पनीका संचालकहरुले यो वर्ष त्यस्तो योजना बनाएनन् ।
त्यसैले सामान्य ढंगले बित्यो,ब्रोकर अफिसका प्रबन्धक निर्देशकहरूको दशै । अनलाइन ब्रोकर सेक्युरिटिज प्रा।लिका प्रबन्धक निर्देशक अन्नत पौडेलले यो दशै पत्रपत्रिका र किताब पढेर बिताए । अघिल्ला वर्षहरुमा उनि विदेश या नेपालकै बिभिन्न ठाउँहरूमा घुम्न जाने गरेका थिए । तर यो वर्ष भने घरमै बस्ने योजना बनाए उनले । ओखलढुङगा घर भएका पौडेल धेरै जसो दशै काठमाडौं र अन्य स्थानमा मनाउने गरेका छन् ।
दशै चाड मनाउने तरिका सबैको भिन्न भिन्न हुने गर्दछ । कसैले आफ्नो लगि मात्र सोच्ने गर्दछन भने कसैले परिवारको बारेमा पनि सोच्ने गर्दछन् । त्यसै मध्य एक पात्र हुन्, भरत रानाभाट । स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष तथा कोहिनुर इन्भेष्टमेण्ट एण्ड सेक्युरिटिज प्रा।लिका प्रवन्धक निर्देशक भरत रानाभाटले पनि दशै सामान्य तरिकाले मनाएका छन् । पोखरा घर भएका उनि प्रत्येक दशै पाखरामै मनाउने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘दशै भनेको परिवार संग रमाइलो गर्ने चाड हो । दशैमा आफु मात्र घुम्न जानु त्यति उचित नभएकाले दशै परिवारसंग मनाउने गरेको छु’ ।
क्रिष्टल कचंनजग्गा सेक्युरिटिज प्रा।लिका प्रबन्धक निर्देशक तथा ब्रोकरका पूर्व अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले पनि यस वर्षको दशै सामान्य तरिकाले मनाएका छन् । दशैलाई भनेर कुनै रकम नछ्ट्याएको उनि बताउँछन् । उनले भने ‘यो वर्षको दशै सामान्य तरिकाले काठमाडौंमा नै मनाइयो ।
पूंजी बजारमा लगातार रुपमा देखिएको गिरावटले यस क्षेत्रमा सकृय ब्रोकर मात्र होइन कि लगानीकर्ता अझ निराश बनेका छन् । दशैं लगायतका कुनै चाड पर्वले उल्लास ल्याउन नसक्ने अवस्थामा अहिले नेपालको पुँजी बजार पुगेको छ ।
वित्तीय विवरणमा के-के हेर्ने ? कसरी मुल्यांकन गर्ने ?
हालसम्म ४० वटा कम्पनीले लाभांशको विवरण सार्वजनिक गरे
गुराँस लाइफलाई नेप्सेको स्पष्टिकरण, लाभांश संशोधन गर्न समितिको निर्देशन
हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर सूचिकृत
सिनो हाइड्रो सगरमाथा पावरको २२ प्रतिशत लाभांश
तपाईको शेयर भएको बैंक तथा कम्पनीले कति दिँदैछ लाभांश ?
प्रम रोजगार कार्यक्रममा जुम्लाका १५ हजार सूचीकृत
बाराको एक कपडा उद्योगमा आगलागी, एक करोडको क्षति
पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने अधिकांश पुल जिर्ण, भ्वाङ्ग परेपछि जोखिम बढ्यो
थप ५७० जनामा कोरोना पुष्टि, १४ जनाको मृत्यु
चीनको आर्थिक वृद्धिदर ४४ वर्ष यताकै कम हुने !
कोरोना भाइरसको कुन खोपको अबस्था कहा पुग्यो
अर्बपतिको उद्योगमा काम गर्ने भारतीय कर्मचारीहरु पनि मालामाल
इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाँडे कोरोना संक्रमित, 'स्वास्थ्य ठिक छ'
क्लिनफिडको अर्को समस्या, इन्टरनेट र ओटीटी मार्फत रकम विदेशीने डर
अमेरिका महामारीमा नेपालीको दशैं, टीका लगाउने साइत दुईवटा दुई दिन
हुम्ला बासीको दशैं महँगो